Wed, Jun 3, 2020 at 12:54pm
१५ लाखको लगानीमा खुल्यो 'कपडा बैंक'
धनगढी, २० साउन । सोमबार धनगढी उप-महानगरपालिका-४ शिवपुरी धाममा कपडा बैंकको उद्घाटन भएकाे छ । धनगढीका व्यवसायीहरु गोपाल हमाल, श्याम हमाल र देवेन्द्र हमालको १५ लाखको लगानीमा निर्माण गरिएको कपडा बैंकको सोमबार औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरिएको हो । सुदूरपश्चि प्रदेशसभा सदस्य डिल्लिराज पन्त र धनगढी उप-महानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले संयुक्तरुपमा कपडा बैंकको उद्घाटन गरेका हुन् । कपडा बैंकको उद्घाटनपछि प्रदेशसभा सदस्य पन्तले धार्मिक क्षेत्रमा निःशुल्क कपडा बैंक सञ्चालन..
बेलायती बैंक एचएसबीसीले ४ हजार रोजगारीका अवसर कटौति गर्ने
लण्डन, बेलायत, २० साउन बेलायती बैंक एचएसबीसीले चार हजार रोजगारीका अवसरलाई कटौति गर्ने सोमबार सार्वजनिक एक घोषणामा उल्लेख छ । एचएसबीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन फ्लिन्टले बैंकलाई नयाँ आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन बैंकले आफ्नो सेवाका लागि उपलब्ध गराउँदै आएका चार हजार जागिरका अवसरलाई घटाउने बताउनुभएकोे हो । “हामीले बैंकलाई पुन : संरचना गर्ने उद्देश्यले हाम्रो सम्पूर्ण श्रमशक्तिको दुई प्रतिशत अर्थात् चार हजार पदलाई हटाउन..
राष्ट्र बैंकले आइतबार २० अर्ब निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल गर्दै
शुक्रबार, श्रावन १७, २०७६ साल
काठमाडौँ, १७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु २० अर्ब बराबरको निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यही साउन १९ गते १५ दिनका लागि निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल गरिने भएको छ । बैंकले त्यसलाई निक्षेप सङ्कलन उपकरणको नाम दिएको छ । घटीमा रु पाँच करोड र बढीमा रु पाँच करोडले भाग गर्दा निशेष भाग जाने गरी कूल..
सहकारीलाई अंकुश ! १६% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने
काठमाडौं, १७ साउन । अब सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएकाे छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा तोकिदिएको हाे । सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी ब्याज असुली रहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगतको सहकारी विभागले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा तोकिदिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरलाई मुख्य आधार बनाएर..
नेपाल बैंकले खुलायो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विज्ञापन, तलब ३ लाख
बुधबार, श्रावन १५, २०७६ साल
काठमाडौँ, १५ साउन नेपाल बैंकले चार महिना देखि खालि रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को पदपर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । बुधबार खुल्ला गरेको विज्ञापनमा २१ दिनभित्र बैंकको प्रधान कार्यलयमा आवेदन दिन बैंकको बताएको छ । सुचनामा बैंकले ३ लाख तलव सहित कार्यसम्पादनको आधारमा अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गर्ने बताउको छ । सिइओको न्युनतम शौक्षिक योग्यता व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तिय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र,..
भुक्तानी सेवाप्रदायक सेलपे सेवा शुरु, कसरी काम गर्छ?
काठमाडौँ, १४ साउन मंगलवारदेखि नयाँ भुक्तानी सेवाप्रदायकले सेलपे सेवा शुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्राईभेट लिमिटेडले सेलपे सेवा संचालनमा ल्याएको हो। मोबाइल तथा वेब एप्लीकेशनको माध्यमबाट विभिन्न भुक्तानी गर्न सकिने सेलकमले जानकारी दिएको छ। वालेट भने होइन। कम्पनीका अनुसार वेब तथा एप्लीकेशनमा खोलिएको आफ्नो खातामा पैसा जम्मा हुँदैन। यसमा भएको खाता सिधै बैंकसँग जोडिन्छ। अथवा बैंक खातासँग जोडिने यसको..
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सिइओ राष्ट्र बैंकले आफै छनौट गर्ने
काठमाडौं, १४ साउन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 'सिईओ'को छनौट नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सिईयो छनौट राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिएको बताएका हुन् । उनले मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्वच्छताका लागि पनि त्यसका सिईओको छनौंटमा हस्तक्षेप..
वाणिज्य बैंकले टेरेन राष्ट्र बैंकको निर्देशन !
सोमबार, श्रावन १३, २०७६ साल
काठमाडौँ, १३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी पुर्याउन गरेको अनुरोधलाई नेपालका प्रायःसबै वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरिदिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा गत आवको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा ८.६ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गरेको उल्लेख छ । साना किसान राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्दै..
अर्थमन्त्रालयद्वारा नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छान्न ३ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौटका लागि समिति गठन भएकाे छ ।अर्थमन्त्रालयले बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौटका लागि बैंक संचालक समितिका सदस्य दिपेन्द्र बिक्रम थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यिय समिति गठन गरेको हो । नेपाल बैंक लिमिटेड सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपालको पुरानो बैंक हाे । समितिका सदस्यहरुमा आइक्यानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र उपाध्यक्ष मदन शर्मा रहेका छन् । समितिले छिटै..
नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ, १२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार रु १३ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले बोलकबोलकको माध्यमबाट ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले उक्त प्रक्रियामा सहभागी भई ट्रेजरी बिल खरीदका लागि आग्रह गरेको छ । बैंकले यसअघि पनि यही साउन ६ गते टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो ।..
राष्ट्र बैंकका ९ कार्यकारी निर्देशकको सरूवा, को कहाँ पुगे ? [सूचीसहित]
शनिबार, श्रावन ११, २०७६ साल
काठमाडौं, ११ साउन । राष्ट्र बैंकका ९ कार्यकारी निर्देशकको सरूवा भएकाे छ । बैंकले साउन १० गते निर्णय गर्दै साउन १२ देखि लागू हुने गरी कार्यकारी निर्देशकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो। बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा कार्यर कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई संस्थागत योजना विभागमा सरूवा गरिएको छ। यसैगरी भुवन कँडेललाई विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागमा खटाइएको छ। जिम्मेवारी हेरफेर भएका कार्यकारी निर्देशकको सूची यस्तो छ..
पहिलाे पटक नेपालका ५ बैंकलाई ‘एशिया मनि अवार्ड’
काठमाडौं, १० साउन । युरोपबाट निस्कने पत्रिका ‘युरो मनि’ले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने ‘एशिया मनि अवार्ड’बाट यसपाली नेपालका ५ वाणिज्य बैंकहरु पुरस्कृत भएका छन् । १२ जुलाईमा हङकङमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न सात विधामा नेपालका ५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले अवार्ड जितेका हुन् । विश्वभरका करिब २ हजार बैंक यो अवार्डका लागि नोमिनेसनमा परेका थिए । हरेक देशलाई छुट्टाछुट्टै यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । यसमा नेपाली बैंकहरुलाई..
उत्पादनमूूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जाको व्यवस्था
काठमाडौँ, ८ साउन नेपाल राष्ट्र बैंकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ । आज जारी भएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । सहुुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने तथा त्यस्तो..
काठमाडौँ, ८ साउन । मेगा बैंकको गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप सङ्कलन १९ अर्ब वृद्धि भई करिब ८२ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै गत वर्ष कर्जा प्रवाहमा रु १५ अर्ब ५० करोड वृद्धि भई करिब ७३ अर्ब पुगेको छ । सो अवधिमा ग्राहक संख्यामा झण्डै १ लाख ४६ हजार वृद्धि भई ६ लाख ४३ हजार पुगेको सो बैंकले जनाएको छ । देशभर मेगा..
बिग मर्जर सकस : 'लभै' परेन !
काठमाडौँ, ८ साउन । बिहान ९ बजेदेखि बसेको संचालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट पास गरेसँगै ४ बजे सार्वजनिक गर्ने समय तोकिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ४ बजे चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको हो । गत शुक्रबारदेखि मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीको छलफलमा जुटेको राष्ट्र बैंकले बुधबार बिहानमात्रै सहमति जुटाउन सकेको हो । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेसँगै बैंकहरूको संख्या घटाउने..
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुने
काठमाडौं, ८ साउन । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिबाकोटीले बुधबार अपराह्न ४ बजे र्‍याडिसन होटल, लाजिम्पाटमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । ‘हाम्रो सञ्चालक समितिबाट मौद्रिक नीति पारित भइसकेको छ’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘साँझ ४ बजे सार्वजनिक हुने पक्का भइसक्यो ।’ राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमै..
पोखरा, ८ साउन । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकस्थित परियारटोलका १२ दलित घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा मिडटाउन र वाराही टाउनले संयुक्तरूपमा सो टोलका गरीब तथा विपन्न अवस्थाका उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक वर्षको बीमा गराएका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले स्थानीय सुरेश परियारलाई बीमाकार्ड हस्तान्तरण गर्दै ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानलाई..
आक्रामक लगानी रोक्न राष्ट्र बैंकले लगाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अंकुश !
काठमाडौँ, ६ साउन । जोखिम बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तीब्र दबाब दिएको छ । बैंकहरु एग्रेसिभ हुँदा जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ । आक्रमक कर्जा लगानीलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आक्रामक लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अंकुश लगाउन पूँजी कोष अनुपात वृद्धिको नयाँ योजना..
चापागाउँमा प्रभु बैँकको १ सय ८८औँ शाखा
ललितपुर, ५ साउन गोदावरी नगरपालिका –१० चापागाउँमा प्रभु बैंकको १८८औँ शाखा स्थापना गरिएको छ । सो बैंक स्थापना भएसँगै चापागाउँवासीले थप सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । सो अवसरमा शाखाको उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनले चापागाउँमा बैंक स्थापना गर्न प्रचुर मात्रामा लगानी गर्ने वातावरण रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादनमूलक एवं कृषि क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट आर्थिक समृद्धि हुनेछ ।” सो बैंक सञ्चालनका..
अन्तत: मर्जर नीतिबाट पछि हट्याे राष्ट्र बैंक, २२ बैंक बने 'उल्लु'
काठमाडौं, ५ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउनेतर्फ कस्सिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः पछाडि हटेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७६\_७७ को लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले फोर्स मर्जरको नीति आउने बताएका थिए । साथै, गर्भनरले समयसीमा तोकेर मर्जरको लागि जोडी खोज्न सामूहिक निर्देशन दिएका थिए । बैंक..
सिभिल बैंकको शाखा अब बाँकेको कोहलपुरमा
कोहलपुर, २ साउन । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बाँकेको कोहलपूरमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले गरेका हुन् । शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथी तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरु सिभिल बैंकको प्रदेश नं. ५ का प्रमुख किरण धमला सो क्षेत्रका राजनीतिक व्यक्तित्वहरु, उद्योग व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिती थियो । ..
राष्ट्र बैंकद्वारा ‘ग्रामीण स्वावलम्बन कोष’ हस्तान्तरण
काठमाडौँ, ३१ असार राष्ट्र बैंक मातहत रहेको ‘ग्रामीण स्वावलम्बन कोष’लाई साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । गत वर्षको सरकारी निर्णयअनुसार आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कोष हस्तान्तरण गरेको हो । विसं २०४७ सालमा सरकारको रु ५४ करोड र राष्ट्र बैंकको २५ करोड..
आज आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बैंक राति अबेरसम्म खुल्ने
काठमाडाैं, ३१ असार । आज अर्थात् मंगलबार राति अबेरसम्म बैंकको खुल्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत राति अबेरसम्म बैंक काउन्टर खुलाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो। आज आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम दिन भएकाले राजस्व चुक्ता गर्ने म्याद पनि अन्तिम दिन भएको भन्दै बैंकहरुलाई उक्त दिर्नेशन जारी गरेको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नै निर्देशन जारी गर्दै खर्चको चेकहरु सम्भव..
जनता बैंकको १४२ औं शाखा ललितपुरको खुमलटारमा
ललितपुर, ३० असार । जनता बैंकले ललितपुर खुमलटारस्थित आफ्नो शाखा कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । उक्त शाखाको बैंक संचालक समिति अध्यक्ष केशब बहादुर रायमाझीले सोमबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा बैंकका अन्य संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री गायतको उपस्थिति थियो । देशको सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले शाखा बिस्तारलाई तिब्रता दिएको जनता..
२० अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गरिँदै
काठमाडौँ, २९ असार नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार रु २० अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । बैकले यही असार ३१ गते बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूची सार्वजनिक गर्दै कुन संस्थाले के कति मात्रामा ट्रेजरी बिल खरीद गर्न लागेको हो जानकारी दिने जनाएको छ..
सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याल, चार बर्षका लागि पौड्याल नियुक्त
असार २९, काठमाडौं । सनराइज बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याललाई नियुक्त गरेको छ। एक महिनाअघि बैंकले प्रमुख कार्यकारीमा निरज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो। उनले करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि दुई जना सञ्चालकहरुले बिरोध जनाएका थिए। एनआइसी स्थापनामा सक्रिय भूमिका खेलेका पौडेलले त्यहाँ पाँच बर्ष काम गरेपछि लक्ष्मी बैक स्थापनाको प्रकृया थाल्न त्यता गए। लक्ष्मी बैंकमा एक बर्ष काम गरेपछि पौड्याल अध्ययनका लागि लण्डन..
‘क’ वर्गका २२ बैंकले बुझाए मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता, विकास बैंक र लघुवित्ततर्फ भने अझै आनाकानी गर्दै
असार २९, काठमाडाैँ मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता बुझाउने ‘क’ वर्गका बैंकको संख्या २२ पुगेको छ । मर्जरमा जनेमा प्रभु बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) ले पनि मर्जरमा जान नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । प्रभुले बिहीवार र बीओकेले शुक्रवार केन्द्रीय बैंकमा मर्जरको प्रतिबद्धता बुझाएका हुन् । यससँगै मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता बुझाउने ‘क’ वर्गका बैंकको संख्या २२ पुगेको छ..
सिभिल बैंक लिमिटेडको ९२ औं शाखा दाङको लमहीमा
लमही, २८ असार । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा दाङको लमहीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुल बहादुर केसीले गर्नुभयो । शाखाको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरु, सिभिल बैंकको प्रदेश नं. ५ का प्रदेश प्रमुख किरण धमला, सो क्षेत्रका राजनैतिक ब्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी लगायतको उपस्थिति थियो । लमही शाखा सहित सिभिल बैंककोे..
कृषिबाट ७४ करोड ६८ लाख बीमा शुल्क आर्जन, अरबौंको जोखिम बहन, कुन कम्पनीको कति ? (सूचिसहित)
शुक्रबार, आषाढ २७, २०७६ साल
काठमाडौँ, २७ असार । जेठ मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कृषि बीमा ७४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । जसबाट १६ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २९ हजार ४०१ रुपैयाँ जोखिम बहन भएको छ । समा शिखर इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल, प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ र आईएमइ जनरल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । जसमा शिखर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ५७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ,..
सिभिल बैंकका ग्राहकलाई ग्राण्डी हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विशेष छूट !
काठमाडौं, २७ असार । आफ्ना ग्राहकलाई सहुलियत प्रदान गर्न सिभिल बैंक लिमिटेडले ग्राण्डी हस्पिटलसंग सम्झौता गरेको छ । उक्त सन्दर्भमा एक कार्यक्रमबीच ग्राण्डी हस्पिटलसंग सम्झौता भएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंकका तर्फबाट कन्ट्री हेड – मार्केटिङ शीलु अर्याल र ग्राण्डी हस्पिटलको तर्पmबाट मार्केटिङ तथा बिजिनेस डेभलपमेन्ट प्रमुख दिनेश पौडयालले हस्ताक्षर गर्नुभयो । अब यस सम्झौतासँगै सिभिल बैंकका ग्राहकहरुले ग्राण्डी हस्पिटलमा उपचार..
Results 521: You are at page6of 18